>အီးဘွတ်လိုက်ဘရီလေး (Offline Ebooks Libery) | ချမ်းလင်းနေ
လွတ်လပ်သော ရင်ဘတ်တွေဖြင့် စီးဆင်းကြမယ်လေ စာပေမြစ်ဆီသို့
Hey there! Thanks for dropping by ချမ်းလင်းနေ! Takealook around and grab the RSS feed to stay updated. See you around!
>အီးဘွတ်လိုက်ဘရီလေး (Offline Ebooks Libery)
Filed under: စာအုပ်များ, ဗဟုသုတ —2Comments	December 18, 2010
ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ သိပ္ပံမောင်ဝ၏ ဝတ္ထုဆောင်းပါးများစာအုပ်လေးကို ဖတ်ချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်သူများ ဒေါင်းသွားကြပါ။
ဒီစာအုပ်ပိုင်ရှင် ကျွန်တော်အဒေါ်ဆီက မနည်းတောင်းလာရတာ။ အတော်ကို ဟောင်းနေပြီ။ ကျွန်တောစာတွေ ဖတ်ချင်လာတာကလည်း သူကြောင့်ပါ။ သူက စာအရမ်းဖတ်တယ်။ စာအုပ်တွေစုတာလဲ ဝါသနာပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပါသလဲဆို အိမ်ထောင်မပြု အပျိုကြီးဘဝ ရောက်သွားတာသာကြည့်ဗျာ။ တနေ့တနေ့ စာအုပ်နဲ့ မျက်နှာမခွာဘူး။ အလုပ်နားတာနဲ့ စာအုပ်ချည်းဖတ်နေတော့တာပဲ။ သူဆီမှာဆို ဟိုအရင်က စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆို စာအုပ်တွေ ဝယ်မဖတ်ခဲ့ရဘူး။ အဘိုးစုထားခဲ့တာရော၊ အဒေါ်စုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေရော မနည်းရှိခဲ့တာ။ အခုတော့ အဒေါ်လဲ သူအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ သူ့စာအုပ်တွေအပေါ် မခင်တွယ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် သူစာအုပ်အကုန်လုံးကို အဖိုးရဲ့ဇာတိမြေ ညောင်ရမ်းမြို့က အဘိုးကိုယ်တိုင်ထူထောင်ထားခဲ့တဲ့ စာကြည့်တိုက်မှာ အကုန်သွားလှုခဲ့တယ်ဗျာ။
အခုဒီစာအုပ်တောင် မနည်းတောင်းလာရတာ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာလဲ မရှိသေးဘူး။ ဒါကြောင့် သူများတွေလဲဖတ်စေချင်လို့ စကန်ဆွဲပြီး တင်လိုက်တာ။ စာတော့ မရိုက်နိုင်လို့ဗျာ။ ကျွန်တော် နောက်ဆို ဖရီးအီးဘွတ် လိုက်ဘရီလေးတစ်ခု လောက်လုပ်ချင်သေးတယ်ဗျာ။
အမိမြေက ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ ခက်နေတဲ့သူတွေကို သူတို့လိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေ၊ သူတို့ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို PDF ဖိုင်အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော့် လိုက်ဘရီလေးဆီကနေ လာရောက်ကူးယူလို့ရအောင်ပေါ့။ အခုလောလောဆယ် ကွှန်တော်ဆီမှာ အွန်လိုင်းကနေ စုထားတဲ့စာအုပ် ၂၀၀၀ ကျော်သွားပြီ။ အခုလောလောဆယ် မြန်မာ EBook တွေပဲ ဦးစားပေးစုဆောင်းနေသေးတယ်။ နောက်မှ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေ ဆက်စုမယ်။ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်သ၍၊ စုဆောင်းနိုင်သ၍ပေါ့။
ကျွန်တော်ဆီမှာ အခုလောလောဆည်ရှိသမျှ မြန်မာEbook စာအုပ်တွေကို အားတဲ့အချိန်လေးမှာ စာရင်းလုပ်နေတာ။ အတော်ပြီးနေပြီ။ နောက်မှ စာအုပ်စာရင်းကို ပို့တင်တော့မယ်။ မိတ်ဆွေတို့ဆီမှာ ရှိရင်လဲ ရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာPDF Ebookတွေ ဝေမျှချင်ရင် ဝေမျှလို့ရပါတယ်ဗျာ။ chanlinnayblog@gmail.com ဆီသာ ပို့လိုက်ပါနော်။ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ လိုချင်သူများရှိလဲ မှာနော်။ ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ဆို ပို့ပေးလိုက်မယ်။ မေးလ်လေးသာ ပေးခဲ့ပါဗျာ။
Share this:FacebookPrintEmailLike this:Like Loading...
2 Comments: ahphyulay
December 19, 2010 at 4:02 am	>အင်း…ကိုလင်း .. သိပ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲ။ကြိုက်တယ်ဗျာ..။
January 21, 2011 at 11:26 pm	>စိတ်ကူးလေးကောင်းပါတယ် ကိုချမ်းလင်းနေ.. ကျွန်တော်လည်း books-hive ကနေ အစ်ကိုတင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေ ဆွဲရင်းကဆဆင့် အစ်ကို့ဘလော့ခ်ထဲ ရောက်လာတာပါ.. ကျေးဇူးပါ။
>ဖေမြင့် – မရဏနုဿတိနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ »